iPhoto kaabta: Siyaabaha kala duwan si ay u kaabta iPhoto
Afar Siyaabaha iPhoto kaabta
iPhoto waa la dhisay-in tababaraha sawir oo aan kaliya kaa caawinaysaa in aad abaabulo iyo xaalkaa photos aad, laakiin sidoo kale ha aad ka heli dheeraad ah oo ka sawiradan adigoo buugaagta sawir, kaararka Salaan iyo soo duubey. Laga bilaabo halkan, iPhoto ma uu kaydiyo sawirada digital. Hase yeeshee, waxa badbaadiyay xusuus aad.
Sidaas badiyay sano ee sawirada lagu kaydiyaa iPhoto waxaa xaqiiqo ah musiibada. Just qiyaasi dhoola ilmahaaga ugu horeysay oo sawir tallaabo hore, gabadhaada photos qalin, iyo sidoo kale la joogo ugu farxadda qoyskaaga iyo saaxiibadaa - dhammaantiin. Laakiin sug daqiiqad ah; sababta aan gurmad iPhoto si loo sameeyo taasi marnaba dhici?
1. kaabta iPhoto in CD / DVD
2. Isticmaal Time Machine
3. Kaabta iPhoto in External Hard Drive
4. Kaabta iPhoto in Cloud Storage
Dhab ahaantii, iPhoto yimaado iyadoo ay xulashada gubashadii fududahay in gurmad sanamyadiinna iPhoto in CD / DVD. Waa kuwan sida:
2.Select sawiro aad rabto in aad gurmad si CD / DVD. Waxaad dooran kartaa maktabadda oo dhan, album hal ama dhacdo, ama dhawr sawiro. Muujinta shayga aad rabto in aad dib-up by u riixaya. Waxaad dooran kartaa dhacdooyin badan, albums, ama sawiro by haysta hoos muftaaxa Shift inta aad riix. Ogow in tirada photos in gurmad ay u CD / DVD la xadiday by awooda CD ama DVD disc ah. CD A qaban kartaa ilaa 700 MB xogta; DVD ah ku qaban kartaa ilaa 4.7 GB.
3.Go si wadaag Guba ka menu iPhoto ah, iyo raac tilmaamaha shaashadda. Waxaad u baahan tahay in aad is geliso CD / DVD disc iyo magaca disc aqbasho.
4.Click Guba in gurmad iPhoto in CD / DVD. Marka la dhameeyo, kaydka disc dhammeeyayna ay meel ammaan ah - sii qalalan oo ka mid ah taabashada ilmahaaga.
Fiiro gaar ah : Haddii aadan haysan iDVD, isku day kaliya oo ka mid kale oo awood badan software DVD gubashadii u Mac >>
Sida user Mac, waxaa laga yaabaa in aad hore u ogeyd in kasta Mac cusub la yimaadaan ay qalab gurmad u gaar ah oo awood lagu magacaabo Time Machine. Waa barnaamij gurmad si toos ah in nuqul ka mid ah Downlaods wadid aad u adag si joogto ah.
Fadlan ogsoonow in, haddii iPhoto waxaa socda, markaas maktabadaha ma taageeray doonaa by Time Machine inta ay socoto dib ugu. Sidaas waa inaad iPhoto arrin si loo hubiyo Time Machine taageeray ilaa maktabadaha aad. Waxa kale oo aad gacanta dib kartaa ilaa ay ka tagayaan iPhoto, markaas dooran Back Up Hadda menu Time Machine dheeraad ah.
Si kale ee gurmad iPhoto waa in ay isticmaalaan baabuur dibadda adag. Waxa aad u baahan tahay in gurmad iPhoto in dibadda drive adag (HD) waxaa uun drive lagu kalsoonaan karo adag. Qaar ka mid ah noocyada lagu kalsoonaan karo waxaa jira Samsung, Toshiba, Seagate, iyo Western Digital. Kaliya Waxaad raaci kartaa tallaabooyinka fudud ee hoos ku qoran:
1. xiritaanka iPhoto haddii la furo.
2. Isku aad drive dibadda adag tahay in aad Mac isticmaalaya cable firewire ama cable USB. Taasi waxay ku xiran tahay wadid aad u adag.
3. dibadda drive adag waa in loo aqoonsadaa by Mac iyo Jaha. Haddii aan, rakibi darawalka loo baahan yahay ama tixraac buugga user.
4. Hel iPhoto maktabadda oo ag maraya in ay Home (User Name) Sawiro iPhoto Library, iyo jiididda-dhibic si ay suuqa kala drive adag ee dibadda.
5. Magaca ku iPhoto Library asalka ah iPhoto Library.old ama wax kale.
6. Ku hay hoos u muhiim ah Xulashada iyo furi iPhoto. La keeneen in doonaa in aad xulan waxa sawir maktabadda si ay u isticmaalaan. Dooro Library iPhoto ah (on drive dibadda adag).
7. iPhoto waa ku shuban oo dhan sawiro aad ka drive dibadda adag. Ka hor inta aadan heli iPhoto Library.old tirtirto, double hubi sawiradaada.
8. Delete Library.old iPhoto in ay meel sii daayo, ama sii dhowr maalmood oo kaliya ay dhacdo in ay wax khaldan yihiin.
Dhab ahaantii waxaa jira iPhoto gurmad hab cusub: gurmad iPhoto in Cloud Storage. Qaar ka mid ah madaxda shirkadaha waa Carbonite (Unlimited GB u $59.99 / sanadkii), Backblaze (Unlimited GB $ 50 / sanadkii), iyo SugarSync (60 GB u $74.99 / sanadkii). Qaar ka mid ah shirkadaha waxay bixiyaan adeeg sahlan bil walba lacag. Kaliya dooro doorashada kugu habboon.
> Resource > Talooyin > kaabta iPhoto: Waa maxay sida ugu fiican ee kaabta iPhoto?